तपाईको जीवन सुधार गर्नुहोस् - जिउँदो मन - मानसिक स्वास्थ्य र आराम
अब तपाईंको जीवनलाई सुधार्ने औषधिमुक्त तरीका छ!
यस अद्भुत टेक्नोलोजीले बत्तीहरू र ध्वनिहरू प्रयोग गर्दछ अडियो-दृश्य प्रविष्टि (AVE) विशेष कन्फिगरेसनमा तपाईलाई उचित कार्य गर्ने ब्रेनवेभ राज्यहरूमा मार्गदर्शन गर्न मस्तिष्कमा साना बिजुली आवेगका साथै क्रानियो-इलेक्ट्रो स्टिमुलेसन भनिन्छ (CES) तपाईंको स्वास्थ्य, मानसिक क्रियाकलाप, मेमोरी, निद्रा, मुड र अनुभूति सुधार गर्न र लागत कुशल भएको साथसाथै तनाव कम गर्न।
DAVIDs को उपयोग गर्न सजिलो, पोर्टेबल, ह्यान्ड-होल्ड उपकरणहरू जुन एक अत्याधुनिक, गैर-आक्रमणकारी, औषधि रहित स्वास्थ्यको लागि उपयोग दृष्टिकोण प्रयोग गर्दछ।
DAVIDs ले सत्रको बिभिन्न कोटीहरू प्रस्तुत गर्दछ: उर्जा, ध्यान, ब्रेन बूस्टर, स्लीप र राम्रो महसुस।
हाम्रो सत्रहरू राम्ररी परीक्षण गरीएको छ र तपाईंलाई सबैभन्दा प्रभावकारी नतिजा सुनिश्चित गर्न हाम्रा हालसालका अनुसन्धान निष्कर्षहरूको आधारमा डिजाइन गरिएको हो। DAVIDs मा सत्र अनुसन्धान लेख द्वारा समर्थित छ। डीएवीआईडी ​​सत्रहरूले हाम्रो स्वामित्व रेन्डमाइजेशन प्रक्रिया पनि समावेश गर्दछ, जसले हदबन्दीलाई प्रोत्साहित गर्न र प्रवेश प्रक्रिया बढाउन मद्दत गर्दछ।
DAVIDs मा पढ्न को लागी ठूलो सजीलो, अपरेट गर्न अपरेट बटनहरू जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई सत्र सजिलैसँग चयन गर्न अनुमति दिन्छ। DAVID सत्र कोटी बटनहरू अध्यारोमा तिनीहरूलाई हेर्न उपयोगकर्ताहरूलाई अनुमति दिनको लागि जलाइएको छ।
हाम्रो केहि खुशी ग्राहकहरु बाट:
“मैले different० बर्षको लागि धेरै विभिन्न AVS उपकरणहरू सहित अडियो प्रविष्टि प्रयोग गरेको छु। भर्खरै डेभिड पाए प्रसन्नता प्रो र यो म अहिले सम्म प्रयोग गरेको सबै भन्दा राम्रो मेशिन हो। एकीकृत गर्दै CES र अडियो प्रविष्टिको साथ उन्नत प्रकाश वितरणले आश्चर्यजनक परिणामहरू उत्पन्न गर्दछ। प्रत्येक ढाँचामा बहु सेटिंग्स र विकल्पहरू छन् जुन समान ग्रेन्ड अनुकूलनलाई समान उपकरणहरूमा उपलब्ध छैन। यसका साथै २ 25 पूर्वसेटहरू, अनुसन्धान गरिएका कार्यक्रमहरू छनौट गर्नका लागि छन् र तपाईको आफ्नै सुत्र रेकर्ड र स्थापना गर्ने क्षमता छ। यो केहि मध्ये एक हो, सायद मात्र, कम्पनीहरूले वास्तवमै यस अद्भुत क्षेत्रमा अनुसन्धान कोष र प्रकाशन गरिरहेका छन्। साधारण रूपमा उत्तम - दुखाई नियन्त्रण, संज्ञानात्मक सुधार, चिन्ता न्यूनीकरण, द्रुत गहन चिन्तन, निद्रा वा ड्रग बिना इन्धनको बढावा इत्यादि। आदि। तिनीहरूको साइट जाँच गर्नुहोस्, अनुसन्धानमा युट्यूब भिडियोहरू पढ्नुहोस् र हेर्नुहोस्। खुशी, धन्यबाद, ठूलो-समय प्रशंसक! लामो समयदेखि पैसाको उत्तम प्रयोग! ”
~ मार्क बोसरेट
"म धेरै आराम पाएको छु र मेरो काममा केन्द्रित छु।"
। आइरिस पितुलुगा
“म इमान्दार भई मेरो डेभिडबिना बाँच्न सक्दिन प्रसन्नता प्रो"
Yn लिन एलिसन नेल्सन